Mucaaradka Dalka Maali oo ka horyimid Qorshayaasha Urur Gobaleedka ECOWAS ee Ku Saabsan Joojinta Qalalaasaha Siyaasadeed ee ka Taagan Dalka Maali | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Mucaaradka Dalka Maali oo ka horyimid Qorshayaasha Urur Gobaleedka ECOWAS ee...
Mucaaradka Dalka Maali oo ka horyimid Qorshayaasha Urur Gobaleedka ECOWAS ee Ku Saabsan Joojinta Qalalaasaha Siyaasadeed ee ka Taagan Dalka Maali
Kooxda mucaaradka ah ee saameynta ku leh dalka Maali ayaa diiday qorshe ay soo saareen dhex dhexaadiyeyaasha gobolka Axadii oo loogu talagalay in lagu soo afjaro qalalaase siyaasadeed oo ugu yaraan 11 qof lagu diley bishan inta lagu gudajiray Dibadbaxyo looga soo horjeedo Madaxweynaha Dalka Maali Ibrahim Boubacar Keita.Urur Gobalaeedka Galbeedka Afrika ee ECOWAS, oo matalaya waddamada Galbeedka Afrika, ayaa diray. Wufuudda ayaa u ambabaxay dalka Mali todobaadkii hore si ay isugu dayaan inay gacan ka gaystaan ​​joojinta qalalaasaha, iyadoo dibad baxayaashu ugu yeerayaan Madaxweynaha Dalka Maali Keita inuu iscasilo waxa ay ku tilmaameen inuu guuldaraystay inuu joojiyo rabshadaha kooxaha jihaadiyiinta ama wax ka qabashada natiijooyinka lagu muransan yahay ee ka soo baxay doorashadii sharci dajinta ee dhowaanta.
Markii ay soo saareen talooyinkoodii Axadii, waxay waftigu soo jeediyeen in maxkamada dastuuriga ah ee Mali ay eegto doorashadii lagu tartamay iyo in Keita uu abuuro dawlad cusub oo ay ku jiraan xubnaha mucaaradka iyo bulshada rayidka ah.
Isbahaysiga M5-RFP, oo horseeday dibad-baxyada, ayaa meesha ka saaray talooyinka.
“(ECOWAS) waxay u timid inay taageerto Keita waxayna ku hanjabtay M5-RFP. Waxa kaliya ee ay doonayaan waa aragtidooda, aragtida Keita, laakiin ma ahan annaga, ”ayuu yiri af-hayeenka isbahaysiga ee Nouhoum Togo.
Dibad baxyo dheeri ah ayaa lama huraan ahaa ilaa Keita uu xukunka ka dego, Togo ayaa sidaas yidhi.
Dawladdu kama jawaabin codsiyadii faallo. Wakiilka ECOWAS si dhakhso leh ugama jawaabi karo si uu uga faaloodo.
Madaxweynaha ayaa soo bandhigay heshiisyo ay ka mid tahay kala diristiisa Maxkamadda Dastuuriga ah, laakiin mucaaradka ayaa sii adkeeyay tan iyo markii booliisku ay rasaas ku fureen dibad-baxayaashii iyo xubnihii hoggaaminayay la qabtay bishan.
Isbahaysiga ayaa sheegay in 20 qof lagu dilay mudaaharaadka bishan. Wasaaradda Caafimaadka Dalka Maali ayaa sheegtay in Dibadbaxyadda ay Ku Geeriyoodeen Ilaa 11 Qof.
Awoodaha caalamiga ahi waxay ka cabsi qabaan jahwareerka ka jira dalka Mali inay wiiqi karaan ololahooda militari ee ka dhanka ah kooxaha Islaamiyiinta ee ka dagaalama gobolka Galbeedka Afrika. Qaramada Midoobay ayaa leh in ka badan 13,000 oo askari oo nabad ilaalin ah oo ku sugan Maali, oo ah xudunta ugu badan rabshadaha.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay ee Shirka Magaalada Dhuusamareeb
Next articleHogaamiyaasha Midowga yurub waxay la halgamayaan ‘howl aan macquul aheyn’ shir madaxeedka dib u soo kabashada
Mareykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu ka baxayo heshiiska xakameynta diyaaradaha...
Shil Gaari oo Sababay Dhimasho Iyo Dhaawac oo Ka Dhacay Gobalka...